Uhambo lokugqibela loLoliwe lwaseYurophu kwabaqalayo | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Uhambo lokugqibela loLoliwe lwaseYurophu kwabaqalayo
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 15/05/2020)
Nabani na apha ovela ngaphandle kwaseYurophu? Phakamisa isandla sakho, ukuba wena njengoko zibamb 'ongezantsi xa transit luluntu njengoko mna. Uqinisekisa, INew York inendlela yangaphantsi, kwaye iToronto iqhuba imetro, kodwa ngobukhulu, umhlaba uyachuma ezimotweni. Ngoko nanini na sizifumana ukwenza ngcileza ngaphesheya ichibi ukuba fancy Baguette French, izinto afumane intwana hlamarisaka. Oku kuyinyaniso ngakumbi lokuqala namagqala, nabadla ngokungabi abayazi ncam ukulawula indlela uhambo lwabo eYurophu ngololiwe, ingakumbi apho kufuneka bahambe.
Nokuba ngumahluko phakathi kwe-Eurostar kunye Inethiwekhi yeTGV (Timvula a Gumphetho Viesse) okanye ukuzama ukuhamba ukubhukisha izihlalo kunye nokuthengisela phambili, nokuba konke kube kakhulu bit. Kwabo baphulukene njengam, siye bahlanganisana ndawonye hambo ingcono ukuyinika kuni Ultimate Europe Trip ngu Train for Beginners.
Loliwe Transport Ingaba I-Eco-Friendly Way To Travel. Thi sihloko kubhalwe ukuba afunde Train Travel ngu Gcina A Isitimela, Amatikiti amaxabiso aphantsi Iwebhusayithi kwiHlabathi.
I-Europe yokuQeqesha ukuQeqesha kwabaqalayo 1: London
Kukho eziliqela izizathu sibe unyule London njengoko yokumisa yokuqala kule hambo, kodwa jikelele kuso yenza nje ingqiqo kakhulu. Ukusuka North America moya ukuya eLondon rhoqo kwaye sitshiphu, Oko kuthetha ukuba uza konga imali enkulu ngokuhamba ngenqwelo moya ungene eFrankfurt okanye kwezinye iihabhu zaseYurophu.
London sixakeke kakhulu kwaye uya kuba sebubini ekufumaneni izinto ukuze wenze. Ukuba ungumlandeli weHarry Potter, umzi izaliswe ncwadi movie iimbekiselo. Ukuba ukwindawo yemidlalo yeqonga, UShoy likhaya kwelona likhulu kwezolonwabo iBroadway, kwaye nawe uyakwazi ukufumana amatikiti at isaphulelo.
Unga lula tirhisa iiveki apha ngaphandle kokwenza imisebenzi, kodwa ubuncinci, sincoma iintsuku ezine. Xa sele ukulungele ukuya ku, kube lixesha entloko oya kuyo elandelayo.
Uloliwe Ukuma 2: Paris
Awunakubetha iYurophu ngaphandle kokuchitha ixesha kwi ezona zithandana zehlabathi emzini. The City of Lights kukho unxibelelwano-stop, nokuba uya okokuqala okanye yeshumi yakho, kwaye ngethamsanqa ukuba abahambi, i Eurostar train ihamba phantse yonke iyure ukusuka eLondon ukuya eParis. Uhambo kuthatha phezu kancinane 2 iiyure kunye amatikiti kaloliwe angabhukishwa ngexabiso eliphantsi kwangaphambili.
Sincoma ukuchitha iintsuku ubuncinane ezine apha kwakunye, kodwa ukuba ixesha lakho leholide isikelwe umda ungayicofa ibe mbini.
I-Europe yokuQeqesha ukuQeqesha kwabaqalayo 3: Barcelona
Nangona le nganeno kakhulu uhambo ngololiwe, ungenza ngokunenzuzo imoto olele ukufumana isnnoze yakho ngaphambi kokuba ufike kwesi sixeko sonxweme. Jika ujikeleze iKota yeGothic kwaye wonwabe kwi-churros e-chocolate ecociweyo ngaphambi kokuya kwi-Parc Guell.
Elinye lawona macandelo makhulu e-Barcelona kukuba iSpain ishibhile kakhulu xa ithelekiswa nabamelwane basenyakatho, ke uza kufumana okuninzi imali apha. Sincoma kokuhlala iintsuku ubuncinane ezimbini apha ukuhlola isixeko.
Yeka 4: Ilungile uVille
Famous for Boardwalk balo kufutshane kakhulu Cannes, I-Nice Ville ifanelekile ukuba imiswe kuhambo lwakho kaloliwe lwaseYurophu. Nangona isixeko ngokwaso ayikho makhulu capital yaseFransi, indawo yayo ekufuphi wayesiya ufanelwe ngosuku. Ekuqaleni, intloko ku Monaco Ulahlekwe iidola ezintlanu e yekhasino. Nandipha iimoto ezintle ulandele formula 1 umzila kugqatso umkhondo edumileyo. Okulandelayo, thatha uloliwe oya eCannes – ukuba sele kukho ebudeni bomthendeleko mayihlale iqaphele ukuba abadumileyo ezinkulu!
Sincomela ubuncinci iintsuku ezine apha zenzele indawo lonke olo hambo losuku.
I-Europe yokuQeqesha ukuQeqesha kwabaqalayo 5: eRoma
Ikomkhulu Italian umthendeleko ukuba amehlo. Ukusuka kwiSpanish Steps ukuya kwiTrevi Fountain, phantse akukho ndawo awuzukubethwa ngu izakhiwo omangalisayo. Ukuba oko akwanelanga, ukutya kubalulekile slavering phezu. luhamba ipasta tshama kunye gelato entsha kwaye mozzarella inyathi ufikile ngqo ukusuka kwifama.
Ngokuqinisekileyo akukho zinto zininzi ixesha lokuchitha eRoma, kodwa ukuba umele ushiye wenze emva ubuncinane iintsuku ezintlanu.
Yeka 6: Venice
I Ingaba lutyeshelo olubi kunene ukuba akazange athethe eVenice ngexesha uhambo lwakho lokuqala. Ngoxa ndingazange abe nakho okungcono (Abakhenkethi abaninzi kakhulu), lo mzi kunyanzelekile-do. Phakathi gondolas kunye nezikhephe zoluntu, Uyakufumana indlela yakho enqumla kwimigca ukuya kwezinye zezona ndawo zithandekayo eYurophu.
siphakamisa Ukuchitha ubuncinci kwiintsuku ezimbini eVenice Ngaphambi kokuba ukhabe uloliwe ukuya kwindawo oya kuyo.
I-Europe yokuQeqesha ukuQeqesha kwabaqalayo 7: Vienna
Apha siza eshiya indlela kakhulu uhanjiwe kunye nesihloko isuntswana aphume endleleni. Kungenxa kuhle isizathu, nakuba, njengoko amazwe ngaphezulu ibekwe-embindini yaseYurophu akufuneki ngoyaba. Ezi kwabhalwa nangokuvulelekileyo entshonalanga kunye nokungafani okuphawuleka. e Vienna, oku kuthetha ukuba nomsindo amasiko coffee kunye namaxabiso asezantsi. Yintoni enye ufuna?
Siyaleza ubuncinane kwiintsuku ezimbini e Vienna phambi kokugqithela.
Yeka 8: Prague
Esi sixeko sineminyaka eliwaka sidume ngesixeko sakudala. Xa utyelela, musa ukulibala ukuba kunqumama Clock Astronomical ngaphambi kokuba ukubona uYesu Infant. Ukuba nomdla kwimbali, i Ghetto endala angamaYuda aqhubeke ithwala amanqaku inhabitation unyanzelekile. Nangona kule mihla le ndawo iye zalungiswa ngokubanzi, ungakwazi ukutyelela zesikhungu yayo ezintandathu.
Sicebisa ukuba uhlale ePrague kangangeentsuku ezintathu ukuze uphonononge isixeko.
I-Europe yokuQeqesha ukuQeqesha kwabaqalayo 9: Berlin
A baloko ekuzalweni, Berlin namhlanje iliziko hip inkcubeko German. Nokuba uzama ukutyelela i-hipster bar okanye i imyuziyam yobugcisa bezenze yokudlela yokutyela, Berlin kulapho ofuna ukuba. Kukho imithwalo zezinto ukwenza apha, kuquka utyelelo iintsalela le Berlin Wall. Kanjalo, kukho zonke iimyuziyam zemveli neegalari ngokunjalo.
Siyaleza ubuncinane kwiintsuku ezintathu apha ukonwabela onke Berlin has ukunikela.
Amatikiti eLeipzig ukuya eBerlin
Yeka 10: Amsterdam
Sele sibonile emiseleni Venice, kodwa akukho nto ikulungiselele zicocekile, isixeko nangocwangco Amsterdam. I-capital Dutch likhaya izikhephe kunye Bikes kunokuba iimoto, kwaye kulula ukuyisebenzisa lonke ixesha lakho apha gawping kwi izakhiwo.
Sikucebisa ukuba ukuya eAmsterdam ubuncinci iintsuku ezintathu apha, nangona ndingathanda ukwenza ngcono ezine okanye ezintlanu.
Kukho unayo. Ukusuka eLondon ukuya Amsterdam nayo yonke indawo ephakathi, oku ngendlela engcono European wabaqalayo uhambo. e Amsterdam, ukhululekile ukubuyela eLondon usebenzisa Gcina A Isitimela, okanye ilungelo ekhaya intloko evela Netherlands.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Uhambo lokugqibela loLoliwe lwaseYurophu kwabaqalayo” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-trip-beginners/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, kwaye ungayitshintsha i-es to fr okanye tr kunye nolwimi oluninzi olukhethiweyo.
Cologne Carnival Njani Ukufumana Apho